म एक २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको सम्पर्क शक्ति कम छ, के गर्ने होला ? - NepalTrending
﻿म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । तीन वर्षको प्रेमपछि हाम्रो मागीविवाह भएको हो । विवाहअघि हामीबीच यौ’नस’म्पर्क सीमित रूपमा सुरक्षित हिसाबले भैसकेको थियो ।हाल विवाह भएको एक वर्ष पुग्यो । यौ’नस’म्पर्क गर्दा मेरो श्री’मान्को वी’र्य स्ख’लन एक मिनेटभित्र एकदमै छिटो भैहाल्छ, जसले गर्दा म स’न्तुष्ट हुन सकिरहेकी छै न। यसका लागि उपर्युक्त उपाय के हुन सक्छ ? यौ’नस’म्पर्क सामान्यतः कति अवधिको हुन्छ ? यौ’नस’न्तुष्टि’लाई पो’जिसनले फरक पार्छ कि ? ग’र्भ’वती महिलाले यौ’न’स’म्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन ? हुन्छ भने कुन पोजिसनमा गर्न सकिन्छ ?
किन्सेले गरेको अध्ययनअनुसार यो’निमा लि’ङ्ग प्रवेश गराएको २ मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषको चरमसुख पाएको देखिएको थियो । शीघ्र स्खललाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने निकै बहस पनि वैज्ञानिकहरूमा नभएको होइन ।
लि’ङ्ग यो’नि’मा पसाएको ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० धक्कामै वी’र्यस्खलन भए छिटो स्खलन -भबचथि भवबअगबितष्यल) भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास पनि भए, तर अहिले आफू तथा आफ्नो यौ’नजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्य स्खलन भए त्यसलाई छिटो वीर्यस्खलन भएको स्थिति अर्थात् शीघ्र स्खलन मान्न थालिएको छ । यो कुरा तपाईंको हकमा पनि लागू हुन्छ ।